Jawaab:w/xirsi Tariikh_da snmta qaata reer Borama oo xusa.
Jawaab:w/xirsi Tariikh_da snmta qaata reer Borama oo xusa. 0 July 30, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 744
Jawaab:w/xirsi Tariikh_da snmta qaata reer Borama oo xusa. Waxan marka hore salamayaa dhamaan umadad somaliyeed iyo Somaliland.
Waxan aad u salaamayaa dhamaanta saxafada xorta ah iyo akhristayaasha .
Hadaan u daadago
hadalka halka manta aan usocdo wa hadlkii 27/7/2015 wasiir xirsi qaata oo xusa tariikhda snmta reer Boramow.
Marka hore wa su’aale xirsi
snmta miyuu ku makid ahaa? Jawabta wa may cali_guray baa sheegay.
Balse xirsi wa
shakhsiga kaliya ee qiray in xasuus
ugaysatay snmtu G/Gableedka sida Borama,dila iyo Quljeed halka ay siyaasiyiin ka soo jeeda Goboladaasi
dafireen oo wasiiro iyo madaxkale ba leh.
Waxan leehay markale xirsow
somalialnd ban ku heshiinay oon
ee snmta iyo jabahad kumaan heshiin wasida aad sheegtee calanka iyo
heesta waxa sameeyay reer Awdal .
Tariikhda aad leedahay xusa jawaabtu waa diidnay.waayo adigaa_ba qiree dadkan reer Awdal waxa kasoo gadhay
snmta oo ay kalaysay dad ciyaastii 7,000_kun oo ciyaal iskool iyo dumar u badan
.wan taariikh_madow dhawlab hadaad ka
joogsato kuna dhaxalsiinkarta colaad iyo dhiig sokeeye . Tariikhdani wa mid dad ehal ah lagu layay lagu dhacay
.dhaqan ahaana faan noqon mayso Marka Reer Awdal waxay diyaar u yihiin S/land cadaalad ku
socota doorsho xiligeeda dhacda iyo walaal nimo daris wadaag Dal iyo Dad_ba .
Gudomiyaha xisbiga Wadani :
Mahdi Nuur Cilmi Ireland. No Comments yet... Print
Ololaha Awdal Unity ayaa jago ama dhul ku wareejiyay Qoys danyar ah oo borama kunool kuwaasi oo 3 wiil ka xanuunsanayaan
15/04/2017 - 17:33:42